Friday, 30 Dec, 2016 2:47 PM
नयाँ संविधान जारी हुँदा (२०७२ असोज)देखि नै मधेस केन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा छन् र उनीहरुको भनाइअनुसार त्यो आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । उनीहरुको प्रमुख माग संविधान संशोधनको विषयले अहिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ धुर्वीकरण सिर्जना भएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन परिमाजर्न गर्ने प्रस्तावसहित संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि बढेको राजनीति गतिरोधले निकास पाउने ठोस आधार तय भइसकेको छैन । तर, प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र चुनाव केन्द्रित छलफलमा जुटेका छन् । सत्तारुढ दलका नेताकै भनाइ मान्ने हो भने केही दिनमै स्थानीय तहको चुनावका लागि मिति घोषणा पनि हुँदै छ ।
यस अवस्थामा मधेसी मोर्चाले के गर्छ ? सबैको चासोको विषय बन्न पुगेको छ । मधेसी मोर्चाको एक घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीसँग हामीले मधेसी मोर्चाले अख्तियार गर्ने अबको रणनीतिबारे जिज्ञासा राखेका छौं । प्रस्तुत छ न्यूजसेवाका लागि प्रशान्त ओझाले तमलोपाका नेता त्रिपाठीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रमुख तीन दल चुनाव केन्द्रित छलफलमा जुटेका छन् । मधेसी मोर्चाले कस्तो रणनीति बनाउँदै छ ?
हामी स्पस्ट छौं, संविधान संशोधन नभइ कुनै पनि प्रकारको चुनाव हुन सक्दैन । र, मधेसी मोर्चाले चुनाव स्वीकार गर्ने अवस्था पनि हुँदैन । संविधान संशोधन नभइ चुनावको वातावरण नै बन्दैन । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि बनेको आयोगले तराईं मधेसका ११ वटा जिल्लामा बैठकसम्म पनि गर्न सकेको छैन । जबकी त्यहाँ अहिले कुनै आन्दोलन छैन । यो अवस्था चुनाव गर्त त गाह्रो छ भन्ने कुरा त तीन दललाई पनि थाहा छ ।
यहाँ अर्को विषय पनि छ, संविधान संशोधनमा एमालेको परहेज । एमालेको परहेज पनि उसले आफैंले अगाडि सारेको प्रस्तावप्रति छ । कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइराला र एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेर अगाडि सारेको प्रस्ताव नै अहिलेको सरकारले ल्याएको हो । यसमा एमालेको विरोध किन ? यसबाट त प्रस्टसँग बुझिन्छ एमालेले चुनाव चाहेको छैन भनेर । चुनाव कसैलाई चाहिएकै छैन । संविधान कार्यान्वयन हुँदै छ भनेर जनतालाई भ्रममा राख्न मात्रै चुनावको कुरा हुँदै छ । राजनीतिक निकासका लागि प्रमुख दलहरु नै बाधक छन् । त्यसमा पनि एमाले बढी नै छ ।
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा तपाईहरुबीचमै पनि समर्थन भन्दा विरोधको स्वर चर्को थियो । अहिले विरोधका स्वरहरु मथ्थर भएका छन् । यस्तो किन ?
त्यस्तो विलकुल हैन । सायद हामी नेपाली भाषा भाषी नभएकाले पनि हामीले भन्न खोजेको अरुलाई बुझ्न अप्ठेरो भएको होला । हामीले पहिलेदेखि नै स्पष्ट भन्दै आएका छौं, यथास्थितिमा यो संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न सकिन्न । र, अहिले पनि हाम्रो उक्त भनाइ कायम छ । सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव परिमार्जनसहित स्वीकार गरिने छ भन्ने अडानमा हामी अडिग छौं । यद्यपी जसरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ, त्यो एककदम अगाडि छ । तर, हामीले उठाएका सम्पूर्ण मुद्दा सम्बोधन गर्ने खालका विषय संशोधनमा समावेश छैन । यो भन्न त पाउनु पर्यो नी !
संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता भएको छ । अदालतले संशोधन असंवैधानिक ठहर गरेमा तपाईहरुले के गर्नु हुन्छ ?
हामीले त्यसबारे सोचका छैनौं । राजनीतिक विषयमा अदालतले कानुनी फैसला सुनाउला भन्ने हामीलाई लागेको छैन । सर्वोच्चमा मुद्दा परेको विषयमा अहिले हामीबीच छलफल समेत भएको छैन ।
तर, एउटा कुरा के पनि हो भने, यो संविधानका प्रावधानहरुमै विवाद छ । यो संविधानलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । धेरै धाराहरुमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यही सरकार सरकार गठनको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्नु परेको थियो । मैले यस संविधानका प्रावधानमा ८८ ठाउँमा अन्तरविरोध देखेको छु ।
संविधान संशोधन विधेयकमा उल्लेख ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएर संशोधनको बाँकी विषयलाई प्रक्रियामा लैजाने विषयमा पनि तीन दलबीच छलफल चलिरहेको छ । यसमा एमाले पनि सकरात्मक देखिन्छ । मधेसी मोर्चाले यसका के गर्छ ?
त्यस्तो गरिए हामीले अस्वीकार्य हुने छ । सीमांकन परिमार्जन गर्ने अहिलेकै प्रस्तावमा पनि हामीले चित्त बझाउन सकिने अवस्था छैन । हामीले भनेअनुसार पनि सीमांकन प्रस्ताव गरिएको छैन । सरकारले मध्यमार्ग अपनाउने भनेर ५ नम्बरको सीमांकन हेरफेर गर्ने भनेको हो । त्यो पनि फिर्ता गरियो भने हामीलाई कसरी मान्य हुन्छ । यो विषय हामीले सोचका पनि छैनौं ।
अनि तपाईहरुले भने जस्तै गरी अरुले मान्न सकिने अवस्था पनि छैन नी त ?
संविधानमा उल्लेख गरिएको ७ प्रदेशको खाका कुन सिद्धान्तअनुसार तयार परिएको हो र ? ५ नम्बरको प्रदेश विभाजन हुँदा देश टुक्रिने भयो भनेर हल्ला गर्नेहरुले २ नम्बर प्रदेशलाई मधेसका मात्र जिल्ला भएको एक्लो प्रदेश किन बनाउनु भयो । त्यसमा एमालेको पनि समर्थन छ नी !
अहिले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजान एमाले सहमत भयो भने त्यसपछि चुनावी प्रक्रियामा जान मोर्चा तयार हुन्छ ?
बकैता तयार हुन्छ । हामीले पनि संविधान संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जाउँ भनेका छौं । कार्यान्वयन भनेको चुनावी प्रक्रिया हो । त्यसमा मोर्चाको साथ रहन्छ ।
तर, यहाँ अर्को अप्ठेरो पनि छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रस्ताव जाने भन्ने कुरा आउला । तर, आयोगले त संविधान अनुसार काम नै गरेको छैन । संविधान अनुसार विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायक्त क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्ने हो । त्यो त हुन सकेको छैन । खासमा अहिलेको अवस्थामै निर्वाचनमा जान यो संविधान नै बाधक छ । यो कुरा प्रमुख दलले पनि बुझ्नु जरुरी छ ।
अहिले त संघीयताको विषयमा नै प्रमुख दलहरुबीचमा अन्तरविरोध बढेको देखिन्छ । एमालेका त शीर्ष नेताहरुले नै बाध्यताले संघीयता स्वीकारेको भनिसकेका छन् ? अहिले आएर संघीयता बारे अन्तरविरोध बढ्नुको कारण के होला ?
संघीयताबारे अन्तरविरोध बढ्नुको प्रमुख कारण यो राज्यको बनौट हो । शासनसत्तमा खसआर्यको बर्चश्व छ । त्यो वर्चश्वलाई कायम राख्नुपर्छ भनेर संघीयताबारे गलत प्रचार गर्न थालिएको छ ।
तराई मधेसका एजेण्डा बोकेर तपाईहरु राजधानी केन्द्रित हुनुभएको छ । मधेसमा अराजक समूहले स्पेश पाएको पनि भनिन्छ । यस्तो अवस्था किन आयो ?
यो कुरालाई अलि फरक ढंगले बुझिदिन पनि आग्रह गर्दछु । यो मुलुकको राजनीति परिवर्तनमा भएका हरेक लडाईँमा बराबर हिस्सेदार लिएका छौं र बराबर सहभागी भएका छौं । नेपाललाई गणतान्त्रिक राज्यवस्थासम्म ल्याउन मधेसीले पनि त्यति नै खनु पसिना बगाएका छन्, जति खसआर्यको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले गरेको भन्छन् । यो भ्रममा नरहुँन् खसआर्यका नेताहरु, परिवर्तन उनीहरुले मात्रै गरेका हैनन् । हरेक परिवर्तनमा मधेसीको पनि सहभागीता छ ।
अहिले राज्य सत्ता संचालन गरिरहेका नेताहरु र मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने हामीहरुले सँग सँगै राजनीति थालेका हौं । तर, जब मधेसको कुरा आउँछ, हामीलाई किनारा लगाइन्छ । हामीलाई एक्लो बनाइन्छ । हाम्रो एजेण्डालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर त्यसको अपब्याख्या गर्ने गरिन्छ । यही हो नेपालको समस्या, नेपालको राजनीतिको विडम्बना । राज्यको यही विभेदका कारण तराई मधेसले आफूलाई आन्तरिक उपनिवेश ठानेको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु अगाडि अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका प्रमुख पद दिने विषय चर्चित बन्यो । यो विषय तपाईहरुको एजेण्डामा हो ?
हैन हामीहरुले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं, नागरिकताको सवालमा अन्तरिम संविधानमा भएको प्रावधानलाई नै राखिदिए हुन्छ । त्यतिबेला सबैले मिलेर अन्तरिम संविधान बनाएका हौं । अरु कसको एजेण्डा थियो त्यो हामीलाई थाहा छैन । विशेषगरी हिमाल पहाडका जनतलाई मधेसीका मागविरुद्ध उत्तेजित पार्नका लागि षड्यन्त्रपूर्वक यो विषय चर्चित बनाइएको हो ।
हिन्दीलाई नेपाली भाषाअनुसारै संविधानको अनुसूचिमा राख्नु पर्यो भन्ने माग पनि तपाईहरुले अगाडि सार्नु भएको छ रे ?
त्यो विषय हाम्रो माग हैन । र, एउटा कुरा म प्रस्ट पारौं यहाँमार्फत । यो मुलुकमा देशभक्तिको विषयमा हामीले कसैसँग सर्टिफिकेट लिनु पर्दैन । बरु हामीले अरुको देशभक्तिबारे प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला आएको छ । राष्ट्रघात कसले गर्यो ? दौरासुरवाल लाउनेहरुले नै अहिलेसम्म राष्ट्रघात गरेका छन् । अहिलेसम्म भएका राष्ट्रघातहरु मधेसीले गरेका हैनन् । दौरासुरवाल लाउनेहरुले नै राष्ट्रघात गरेका छन् ।
अहिले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरु नै निरंकुश थिए । तानशाह पनि तीनिहरु नै हुन् । मधेसी तानशाह थिएनन् । कोही ‘माइकालाल’ छैन यो देशमा, जसले हामीलाई देशभक्तिको सर्टिफिकेट दिने कोशिष गरोस् ।
प्रसंग बदलौं, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले केही दिन पहिले एउटा विज्ञप्ती निकारले देश विखण्डतर्फ गइरहेको भन्दै नेताहरुलाई एकप्रकाको चुनौती नै दिएका छन् ? पूर्व राजाको विज्ञप्तीलाई मोर्चाले कसरी लिएको छ ?
पूर्व राजाले बोल्नु, विज्ञप्ती निकाल्नु खासै महत्वको विषय हैन । पूर्वराजा पनि नेपाली नागरिक हुन् । उनलाई पनि बोल्ने अधिकार छ । बोल्नु कुनै अनौठो हैन । तर, उनले आफ्नो अतित सम्झेर बोलुन् । पहिले परिवार सम्हालुन अनि देशको चिन्ता गरुन् । परिवार सम्हाल्न नसकेको मान्छेले के देशको चिन्ता गर्ला र ?
नेकपा एमाले र तपाइहरु परस्पर विरोधी जस्तै देखिनु भाछ । प्रचण्डको सरकार गठन भएपछिको अवस्थामा तपाइहरुबीच पार्टीस्तरमा कुराकानी भएको छैन । व्यक्तिगत भेटघाटमा कस्तो कुराकानी हुन्छ ?
केपी ओली जीसँग त्यस्तो व्यक्तिगत कुरा पनि भएको छैन । एकदिन उहाँको पार्टीको संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोलाइएको थियो । त्यसमा गएर मैले आफ्नो भनाइ राखे । ओली जीले आफ्नो मन्तव्यको अधिकांश समय मेरो भनाइलाई खण्डन खर्चिनु भो ।
केपी ओली जी भनेको हाम्रा लागि कुनै नौलो प्राणी हैन । सँगै राजनीति गर्या हो । समय परिस्थितिले, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले उहाँ अहिलेको ठाउँमा पुग्नु भो । र, उहाँलाई आफू अरुभन्दा फरक छु भन्ने भ्रम परेछ । नत्र भने हामीले सँग सँगै राजनीति गरेका थियौं । आन्दोलनका बेला आधा प्रतिगमन सच्चियो भनेर बीचबाटै भाग्ने मान्छे उहाँ नै हो । गणतन्त्रको कुरा गर्नु भनेको बयलगाडामा चढेर अमेर पुग्छु भनेको जस्तै हो भनेर टिप्पणी गर्ने पनि उहाँ नै हो । त्यसकारण उहाँमा एकप्रकारको परिपक्वता आओस् भन्ने मेरो कामना छ ।
तपाईको व्यक्तिगत व्यवहारको कुरा गर्दा, प्रमुख दलका शीर्ष नेतामध्ये कुनसँग तपाइले सहजताका साथ आफ्ना कुरा राख्न सक्नु हुन्छ ?
म सबै नेतासँग सहज तरिकाले आफ्ना कुरा राख्न सक्छु । मलाई कसैसँग त्यस्तो अप्ठेरो हुन्छ भन्ने छैन । नेताहरु जति छौं हामीले कुनै कुनै बेला सहकार्य गरेका छौं, सरकारमा, सदनमा, सडकमा, जेलमा या निर्वासनमा । त्यसैले हामी सबैलाई सबैको स्वभावबारे पनि जानकारी हुन्छ ।
यही साताको मंगलबार मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच बालुवाटारमा भएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग चर्काचर्की भयो भन्ने खबर आएका थिए । के भएको थियो त्यस्तो ?
हैन यो बाहिर चलाइएको चर्चा मात्रै हो । शेरबहादुरजीसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि राम्रो छ । उहाँको आफ्नो एक शैली छ, त्यो शैली हामी सबैले पचाइसकेका छौं । उहाँसँग रामाइलो नै मान्नु हुन्छ सबैले ।
बिहीबारदेखि तपाईहरु (मधेसी मोर्चा) आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ । र, शुक्रबारसम्म पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे निष्कार्शमा पुग्ने भन्दै हुनुहुन्छ । के विषयमा छलफल हुँदै छ ?
हाम्रो छलफल पछिल्लो राजनीतिक विषयमा केन्द्रित छ । खासमा संविधान संशोधन, एमालेको अवरोध, निर्वाचन घोषणा गर्ने तीन दलको सहमती आदी विषयमा हो ।
आन्दोलनमा जाने भन्ने विषयमा मौन बस्नु भएको छ नी । किन ?
हैन, अहिले हाम्रो जोड निकासका लागि हो । वार्ता र संवादबाटै निकास खोज्ने भनेर आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी हामी राजधानी छिरेका हौं । र, विगत १०÷११ महिनादेखि वार्ता र संवाद मै छौं ।
हामी वार्तामा रहेको बेला कतिपयले अहिले मधेसी जनता आन्दोलनप्रति नकरात्मक भएको भन्ने पनि हल्ला फिजाइरहेका छन् । अवस्था त्यस्तो छैन । मधेस न थाकेको छ, न त हारेको नै छ । हामीले मुलुकलाई धेरै समय दिएका छौं । अझै पनि हामी त्यस विषयमा सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं एकहिसावको हाम्रो आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । परिस्थितिअनुसार आन्दोलनको स्वरुप पनि फरक हुन्छ । परिस्थितिले आन्दोलनलाई उग्र बनाएर सडकसम्म पनि पुर्याउँछ । सडक आन्दोलन रोकेर १० महिनादेखि वार्ता संवादमा छौं । यो असफल भयो भने फेरि पनि सडक आन्दोलन नै गर्ने हो । आन्दोलनको विकल्प छैन ।
मधेस आन्दोलन चलिरहँदा (१ वर्ष अगाडि) तपाइहरुले अगाडि सारेका एजेन्डा र अहिलेका तपाहरुका माग हेर्ने हो भने धेरै एजेण्डाहरु कम हुँदै गएका छन् ? के यो तपाईहरुले आफैंप्रति गरेको अविश्वासको कारण हो ?
एउटा कुरा अहिलेसम्म पनि बुझाउन सकिएको छैन, या यो देशका शासकहरुले बुझ्न नचाहेका हुन् । मधेसको समस्या यो देशको समस्या हैन र ? किन मधेसको समस्या अलग्गै ठानिन्छ ? यो मानसिक दूरी रहँदासम्म देशको राष्ट्रिय एकता कति सबल होला ? राज्यसत्तामा बर्चश्व भएको एउटा समूदायको मात्रै समस्यालाई राष्ट्रिय समस्या ठान्नु अन्यायपूर्ण छ ।
हामीले परिवर्तन खोजेको यो राज्यको बनोटको हो । जो एकल जातीय नश्लवादी बनोट छ । यो राज्यलाई सबै जातीको साझा राज्य बनाउनु छ । हामी संविधानमा बहुजातीय राज्य भनेर नेपालको परिभाषा लेख्छौं । तर, व्यवहार त्यस्तो हुँदैन् । जाती विशेषका आधारमा राज्यले पूर्वाग्रही व्यवहार गर्दा कतिसम्म सहन सकिन्छ ? हाम्रो लडाईँ यही विभेद अन्त्यका लागि हो ।
एकचोटी केही मधेसकेन्द्रित दलका नेतासहित तपाई पनि पहाडको यात्रामा निस्किनु भएको थियो ? कहाँसम्म पुग्नु भो ?
म मेरो देशका ७५ मध्ये लगभग सबै जिल्ला पुगेको छु । तर, सोलुखुम्बु पुग्न सकेको छैन । सायद अब समय मिलाएर यात्रा गर्छु होला ।
मधेस र पहाडका जनताको बीचमा के फरक पाउनु भो ?
भावनात्मक हिसावले कुरा गर्दा केही समानता पनि छन् । र, भौगोलिक वनावटका असमानताबीच कतै भावनात्कम रुपमै असमानताहरु पनि देख्न सकिन्छ । पहाडमा ४० फिटको बोरिङबाट पानी निकाल्न सकिदैन । र, तराईमा झरनाको पानी पिउन पाइँदैन । यो प्राकृतिक वनावटका कारण सिर्जित असमानता हो । र, त्यसका बीचमा केही हाम्रो राज्यले गलत धारणा फैलाइरहेको छ, मधेस र मधेसीका बारेमा । त्यसैले मधेस र मधेसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण या बुझ्ने आधारमा असमानता देखिन्छ ।
यसबा बाबजुद पनि तराई मधेस र पहाडबीचको दूरी जनस्तरमा छैन । यो राज्यस्तरमा छ । जनस्तरमा सबै नेपाली हुन् । सबै मिलेर बसेका छन् र, मिलेर नै बस्न चाहान्छन् । तर, अधिकार बिहीन भएका मधेसी, जनजाती, आदिवासी, दलितलगायतले अधिकारको कुरा गर्दा शासकहरुले मधेस पहाड भनेर द्वन्द्व बढाउने काम गरेका हुन् । पहाडी क्षेत्रका जनतामा मधेसीका मागप्रति नकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने काम शासकले नै गरेका हुन् । अझै पनि सामन्ती राज्य व्यवस्थाका अवशेषहरु बाँकी छन्, जसबाट जनताबीच फुट मच्चाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने काम हुँदै आएको छ । हिमाल, पहाड, तराई र मधेसबीच भावनात्मक समानता कायम गर्न नै हामी अझै संघर्षमा छौं ।